$524M NEM xaday in hack of exchange Japanese Coincheck
sarrifka cryptocurrency Japanese Coincheck xaqiijiyay in $524 milyan ee lacagta digital laga soo xaday-tahay hack ugu weyn ee keli ah ee is-dhaafsiga ah samaynta, xataa outweighing Mt ah. Gox jebinta 2014.
Taasi waa sida laga soo xigtay wargeyska Japanese maggalada Shimbun, taas oo sheegeysa in Coincheck in qaar ka mid ah ayaa sheegay in 500 million cutub oo cryptocurrency loo yaqaan NEM, ku saabsan qiimihiisu 58 bilyan oo Hawiyuhu, ayaa laga soo qaatay boorsada macaamiisha '.
saamiga ayaa hadda dhacay oo ku saabsan $430 million, iyadoo maal-spooked iibinta off tirada ay soo socda warar xan ah hack hore Jimcaha.
Coincheck ayaa lagu soo waramayaa weli isku dayaysa in ay go'aan ka dabiiciga ah ee weerarka, laakiin xusay in cryptocurrencies kale ma ay saamaysay. Eedaha qaar ayaa farta ku Coincheck la'aanta boorsada multi-SIG, taas oo furayaasha badan ayaa loo baahan yahay si ay awood u xawilaadda, qayb ka mid ah dayacanka in fududeeyey hack.
Shirkadda tamarta Canadian isticmaali doonaa gaaska dabiiciga ah inaan cryptocurrency
Iyadoo qiimaha gaaska dabiiciga ah la filayaa inay ku sii yar yahay, mid ka mid ah soo saare Alberta ayaa la timaado hab sheeko si ay u kordhiso line hoose: isticmaalaya il gaaska si ay u server computer in xoog iga doonaa cryptocurrencies laga yaabo qaali ah sida Seeraar.
Iron Bridge Resources Ltd. ku dhawaaqday in ay u sameeyaan lahaa hoosaad cusub oo lagu magacaabo Iron Bridge Technology ee isku day ah in ay ku biiraan cryptocurrency iyo craze blockchain - laakiin sidoo kale si arbitrage faraqa u dhexeeya qiimaha Seeraar, hadda lagu qiimeeyey US $ 11.188 per qadaadiic, iyo AECO gaaska, hadda lagu qiimeeyay $1.98 per kun oo cubic feet.
Iron Bridge ayaa qorshaynaysa in ay gubaan gaas iyo koronto, iyo sida loo isticmaalo korontada in ay awoodda computer hardware macdanta lacagta digital.
Haddii loo maleeyo in 215 kilowatt saac oo koronto ayaa loo baahan yahay in la soo saaro mid Seeraar, Iron Bridge yaabaa US $ 49 per mcf ay gaaska.
Taasi ka badan 30 jeer qiimaha Iron Bridge haatan helo ay gaaska, haddii loo maleeyo in qiimaha hadda AECO iyo Seeraar.
"Ilaa hadda sida aan ahay ka walaacsan, soo saare kasta gaaska qalalan in industry ee waa in ay qaataan wiish a on news this, maxaa yeelay, looxyada agaasimayaasha la doonayo in la yaabanahay sababta shirkadaha aan quduus laga yaabaa qayb ka mid ah ay wax soo saarka si ay this. "ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka GMP FirstEnergy iyo wada-madaxa iibka tamarta iyo ganacsiga Trent Boehm.
Phase 2 of Seeraar (BTC) Bear ...
Post Previous:Chainalysis – Shirkadda wax baabbi'inayay ku Seeraar magaciisa ku
Post Next:Sidee baan ku dhow lumay 200 Seeraar ganacsiga bishan la soo dhaafay